Wasiir Ethiopian ah oo ka tirsan DF oo ku lug leh arrimo halis ah - Caasimada Online
Home Warar Wasiir Ethiopian ah oo ka tirsan DF oo ku lug leh arrimo...
Wasiir Ethiopian ah oo ka tirsan DF oo ku lug leh arrimo halis ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa isa soo taraaya warar ku aadan Heshiisyadii uu dhawaan Madxaweynaha Somalia, Xassan Sheekh magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia kula galay maamulka Soomaalida iyo dowlada Ethiopia.
Wasiir Geelle, ayaa lahaa fekerka uu Xassan Sheekh ku booqday magaalada Jigjiga iyadoo dantii laga lahaa ay aheyd in Xassan Sheekh dhicitaankiisa ka hor laga saxiixo arrimo dhowr ah isla markaana cagsi ku ah Siyaasada ay tiigsaneyso dowlada qunyar socodka ah ee Somalia.
Geelle ayaa Xassan Sheekh Bishii June ee sanadkaani ka dhaadhiciyay in booqasho taariikh ah uu ku gaaro magaalada Jigjiga, waxaana fekerka Geelle diiday Madaxweyne Xassan oo markii danbe ay dowlada Ethiopia ku cadaadisay inuu booqdo Jigjiga si ay halkaasi isugu arkaan.
Geelle, oo kamid ah shaqsiyaadka dowlada Ethiopia ugu jira dowlada Somalia, ayaa kaalin aan qarsoodi laheyn ka qaatay diyaarinta qodobada qarsoodiga ahaa ee laga saxiixay Madaxweyne Xassan mudadii uu booqashada ku joogay magaalada Jigjiga.
Wasiirkaani wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ee lagu magacaabo Geelle, ayaa markiisa hore waxaa xilkaasi usoo dhameeyay Gen.
Gebra waxa uuna ahaa gacanyarihiisa gaarka ah, iyadoo ujeedka laga lahaa kusoo biiritaankiisa Xukuumada Somalia ay aheyd inuu ka dhex shaqeeyo dowlada Somalia iyo Ethiopia.